Thwebula MediaGet 1.4.39 isizulu – Android – Vessoft
MediaGet – a isofthiwe eyayithandwa thwebula amafayela kusukela internet. Isofthiwe ikuvumela ukuba uvule amafayela sesifufula kusekela ukulandwa by the link. MediaGet kwenza ukuba lelisu search elula ifayela eziningi ezithandwayo sites zezifufula. Isofthiwe futhi ikuvumela ukusetha isivinini thwebula, ulungise isaziso futhi enze amafayela uqalisa. MediaGet ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Search Easy and thwebula of amafayela
Amazwana on MediaGet:
MediaGet Ahlobene software: